Izinwele ezinhle kakhulu zobuso obuyindilinga. | Amadoda aSitayela
Kukhona labo abacabanga ukuthi amadoda anobuso obuyindilinga anenkinga yokukhetha izitayela zezinwele. Futhi, yize le mbono ingahle ibe yiqiniso, iqiniso ukuthi kunezinombolo eziningi ze- izitayela zezinwele nezinwele ezivame ukuthanda amadoda anezici eziyindilinga.
Ngaphezu kwalokho, kunamaqhinga amaningi wesitayela njengokukhula kwezinwele zobuso, ezingasiza ukudala ukufiphaza ebusweni nokwenza lezi zinhlobo zobuso lapho i-chin noma i-cheekbones ingabonakali khona ikakhulukazi. Ngokuphikisana nalokho abaningi abangakucabanga, lezi zinhlobo zobuso azigcini kubantu abanesisindo esithile, futhi kunamadoda amaningi amancanyana anezici eziyindilinga ngokuphelele. Kubo bonke, namuhla sizobona ukugunda izinwele okuhle kakhulu, okuthopha kakhulu kulolu hlobo lobuso obuyindilinga.
1 Ama-bangs amafushane obuso obuyindilinga
2 Ama-bangs amade
3 I-Toupee ne-pompadour
4 I-Medium mane
6 Umugqa oseceleni
7 Izangoma ezifushane ezifakiwe
8 Kufushaniswe okufishane
9 Izinwele ezisontekile ngobude obumaphakathi ngama-bangs
10 Izinwele ezihlukanisiwe
Ama-bangs amafushane obuso obuyindilinga
Isitayela se-bangs esifushane isiFulentshi sinqampuliwe iqonde kakhulu futhi ezinhlangothini eziphambene ukugunda izinwele okugcizelela okuningi ebusweni obuyindilinga kusukela ngokumaka umugqa esiphongweni nasebusweni bonke, ubuso buvezwa ngokwedlulele ngokwejometri, kwakha umuzwa we-angular ngaphezulu kulolu hlobo lobuso obumise nxazonke. Ngaphakathi kwama-bangs amafushane singaveza ukwehluka okuhlukile lapho isitayela; ngokunyakaza nangokubukeka okungaxakeki noma okuqondile kwi-tabula rasa. Kuphuma kuwe.
Njengokwangaphambilini, ama-bangs amade, afakwe isitayela ngomphumela we-lopsided, angukusika okunesitayela kakhulu ebusweni obuyindilinga. Futhi kuyenzeka kusukela lapho imboza lonke ibunzi elingenhla linikeza ubuso ubuso obubukeka bukanxantathu. Njengama-bangs amafushane, singakwazi ukusika isitayela ngezindlela ezahlukahlukene, yize lolu hlobo lwe-bangs lufaneleka kakhulu ukuba yizinwele ezinokunyakaza okuningi nokubukeka kwemvelo okuthe nci.
Izitayela ze-toupee zakudala noma ze-pompadour zengeza ukuphakama kobuso obuyindilinga futhi ngaleyo ndlela ziyithambise. Lolu hlobo lwe izitayela zezinwele ezinevolumu eningi engxenyeni engenhla zandisa ubude balolu hlobo lobuso ezibanika isimo se-oval ngakho-ke isitayela esengeziwe. Ngaphezu kwalokho, banikela ngamasentimitha ambalwa angezwakali.
Izinwele ezihhafu ubude zingenye yezinwele zakudala ezisebenza kahle kakhulu kulolu hlobo lobuso futhi zenza kanjalo ngoba kuphawula umehluko omuhle kakhulu phakathi kobuso nezinwele, sibonga izingidi ezinde ubuso buthola ukujula futhi, ngale ndlela, kubukeka kumnyama ngaphezulu. Umbuzo wobude bezinwele yindaba yokunambitheka, kukhona labo abathanda uhhafu wezinwele ogcotshwe futhi ogqinsiwe emazingeni ahlukene noma labo abakhetha ngqo uhlobo lwesilisa lalokho okungaba ukusika u-bob isifazane. Kukhona nalabo abahamba baqonde ngobude obuthuthukile ngaphansi kwamahlombe. Kuyindaba yokunambitha.
Umkhathi omkhulu wezinwele ezifiphele wenze okuningi ngokuthanda amadoda anobuso obuyindilinga. Futhi ukuthi lolu hlobo lokusikeka luvame ukuthanda zonke izinhlobo zamadoda kepha bakwenza ikakhulukazi kubantu besilisa abanobuso obuyindilinga njengoba bebanikeza ubukhulu obuthile ebusweni babo obucabalele. Njengokwazi kwakho, inqubo ye iyaqhubeka Kususelwa ekufeni noma ku-gradient, ekubeni yizinwele ezidlala kakhulu nge-chiaroscuro nangokuqhathanisa. Kumadoda anobuso obuyindilinga, ukuqhathanisa okukhulu nokusikeka kusebenza kahle kakhulu. iyaqhubeka Imfishane kakhulu kuma-hems asemaceleni nangokuguquguquka okuhamba kancane kobude, kugcina phezulu phezulu futhi kuhlanganiswe nevolumu ngaphandle kokufinyelela izingqimba ezinde kakhulu.
Ukuhlukaniswa ohlangothini kungenye yezinwele ezingaphelelwa yisikhathi okuvame ukubhalwa izitayela zalolu hlobo lobuso. Futhi ukwenza ngoba ukwahlukana okuhlangothini kudala umehluko wencazelo ebusweni obuyindilinga. Ukufeza umphumela othophayo ngokwengeziwe singakwazi ukwenza isitayela sezinwele ngevolumu encane enamakhasi engxenyeni yama-bangs, yize izinwele zisuswe ngokuphelele ebusweni nezintshevu zezinsuku ezimbalwa zingabuye zenziwe isitayela salolu hlobo lobuso obuyindilinga.
Izangoma ezifushane ezifakiwe
Ukusikeka kobude obumaphakathi nakho kwenza isitayela salolu hlobo lobuso obuyindilinga, ikakhulukazi ku- izitayela zezinwele ezinezendlalelo eziningi namazinga ahlukene obuthuntu. Bangezela ubukhulu ebusweni futhi ngenxa yezinwele ngokunyakaza okuningi kusukela bayakwazi ukufihla umphumela ocabalele walolu hlobo lobuso. Ukugcizelela ukusika kufanele udlale ngokusikeka okungacacile esigabeni esisikiwe futhi, ngendlela efanayo, udale ukudala ukunyakaza ezindaweni ezihlukile lapho wenza isitayela.
Njengokunqunywa kwangaphambilini, izitayela zezinwele ezinemiphumela efinyelwe kepha enezendlalelo ezifushane kakhulu ziyathopha. esikhundleni sokuthayela izinwele phansi sizodlala ukunikeza ukuphakama izingqimba nezinwele ezihlanganisiwe nezinhlangothi ezihlukile.
Izinwele ezisontekile ngobude obumaphakathi ngama-bangs
Njengezinwele eziqondile, zezinwele ezisontekile nezamadoda anobuso obuyindilinga, ukugunda izinwele okulingene nobhaki kuvame ukuthanda kakhulu. Futhi bakwenza ngoba dala umehluko othakazelisa kakhulu nomphumela we-chiaroscuro othi, njengakwezinye izimo, engeza incazelo bese udala ubukhulu kubuso obuyindilinga.
Zombili zinemivimbo evundile, futhi zinemivimbo phakathi. Izinwele ezisontekile zifakwe kunoma iyiphi yalezi zinguqulo ezimbili bavame ukwenza isitayela sobuso obuyindilinga futhi bakwenze ngokuhamba kwama-curls, enikeza ukugqama ezinweleni hhayi ebusweni. Ngaphezu kwalokho, izintshebe ngobude obuhlukile zinikeza incazelo nokwehluka kobuso obuyindilinga.
Ukusikeka kwesitayela se-asymmetrical nakho kufanelekile emadodeni anobuso obuyindilinga. Lolu hlobo lokusikeka olwenza umehluko omkhulu phakathi kwengxenye eyodwa yobuso nokuphambene, zithopha ngokuphelele lobu buso obuyindilinga ngqo ngenxa yalesi sizathu. Zisebenza kahle kakhulu uma umehluko uqine kakhulu, ngokwesibonelo, uhlangothi olufushane kakhulu uma kuqhathaniswa nolunye olune-cape ende nama-bangs. Uma futhi, i bheka ihambisana nentshebe, lolu hlobo lokusika luyi-hit eqinisekile.
Ngabe kukhona owaziyo ukugunda izinwele kobuso obuyindilinga esingakaze sisho? Sishiyele amazwana bese usitshela ubuqili bakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izinwele ezinhle kakhulu zamadoda anobuso obuyindilinga